Mayelana ne-Abu Dhabi | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Mayelana ne-Abu Dhabi
I-Abu Dhabi inhloko-dolobha ye-United Arab Emirates futhi ihlala kuma-80% ezindawo ezihlangene ze-UAE zamazwe ayisikhombisa. I-Abu Dhabi ihlanganisa cishe i-67, 340km2, ehlanganiswa kakhulu nehlane, okubandakanya ingxenye ye-Empty Quarter (iRub Al Khali) kanye namaflethi kasawoti / isabhuka. Ugu lwe-Adu Dhabi lufinyelela ngaphezulu kwe-400km.
umphakathi onamasiko ahlukahlukene futhi ahlukahlukene
Umnotho okhula ngokushesha kakhulu
I-Abu Dhabi ibe nezinguquko ezinkulu emashumini amaningi eminyaka. Izinguquko zenzekile ngezindlela ezinhle kakhulu, ziletha ukukhula komnotho okungakaze kubonwe ngaphambili futhi okuye kwabona i-Emirate ikhula kakhulu futhi manje sekuyidolobha elikhulu elihlakazekile. Konke lokhu kwenzelwe ukuthi kwenzeke ngoba abaholi baka-Abu Dhabi bakubonile futhi baqhube intuthuko ngokususelwa emafutheni amaningi kawoyela nogesi wemvelo i-Emirate anayo.
Okokulawula, i-emirate ihlukaniswe izifunda ezintathu. Owokuqala uhlanganisa i-Abu Dhabi idolobha, eliyidolobha elikhulu le-emirate nesihlalo sobumbano sikahulumeni. Idolobha lesiqhingi i-Abu Dhabi lingamamitha angama-250 ukusuka ezwenikazi futhi linamanye amadolobha amaningi. Leli dolobha lixhunyaniswe nezwe elikhulu yiMaqta, iMussafah, neSheikh Zared amabhuloho asemqoka ngenkathi amanye esakhiwa.
Umlando omfushane wase-Abu Dhabi
Izingxenye ze-Abu Dhabi zaxazululeka emuva emuva eminyakeni eyinkulungwane yesithathu BC, futhi umlando wayo wokuqala ulandela izindlela ezihlasimulisayo, zokwalusa nezokudotshwa kwalesifunda. 'I-Dhabi,' eyaziwa nangokuthi i-Arabian Gazelle iyisisekelo segama elanikwa inhlokodolobha yezwe i-Abu Dhabi (okusho ukuthi uBaba weGazethi) ngabazingeli besizwe sokuqala sakwaBani Yas abaqala ukuthola lesi siqhingi lapho beqala babelandela umkhondo futhi bathola umthombo wamanzi amnandi.
Kwaphela amakhulu amaningi eminyaka ukwalusa amakamela, ezolimo, ukudoba, kanye nokumba phakathi kwe-pearl kwakuyimisebenzi ephambili ngaphakathi kwabathumbi, kuze kube maphakathi nekhulu lama-20, cishe ngonyaka we-1958 lapho ukutholakala kwamafutha kanye nentuthuko ka-Abu Dhabi wanamuhla.
I-Abu Dhabi ekuqaleni yayingumphakathi omncane, onomqondo wokuziphatha okuhle, kepha namuhla ungumphakathi onamasiko ahlukahlukene ngokufika kwezinye izinhlanga kanye nezizwe ezivela kuwo wonke umhlaba. Le ntuthuko eyingqayizivele eye yenzeka ePersian Gulf isho ukuthi i-Abu Dhabi ngokuvamile ibekezelela kakhulu uma iqhathaniswa nomakhelwane bayo, okubandakanya iSaudi Arabia.
Abakwa-Emiratis baziwa ngokubekezelelana kwabo. Ungathola amasonto obuKristu eceleni kanye namathempeli amaHindu namaSikh gurdwaras. Umkhathi wezulu nomhlaba ukhula ngokuqinileko kanti namhlanje kunezikole zase-Eshiya nezase Ntshonalanga kanye nezikhungo zamasiko.
U-Abu Dhabi ungumnikazi omkhulu wengcebo enkulu yama-hydrocarbon e-UAE. Inamandla angaphezu kwama-95% kawoyela namaphesenti angama-92 kaphethiloli. Eqinisweni, cishe i-9% yemithombo kawoyela efakazelwe emhlabeni kanye nangaphezulu kwama-5% kagesi wemvelo emhlabeni. Ngokuya ngomkhiqizo wasekhaya ophelele (i-GDP) nemali engenayo ngayinye, i-Emirate ka-Abu Dhabi yiwona acebile e-UAE. Kudlule imali engaphezu kwe- $ 1 trillion edolobheni.
Njengenye yezomnotho ezikhula ngokushesha emhlabeni, i-Abu Dhabi isiphenduke indawo eshisayo yezimboni zokudala. Ngenxa yendawo yayo ephakathi kwe-Asia neYurophu, iyafinyeleleka futhi ixhumeka kuwo wonke amadolobha amakhulu omhlaba, ukuyenza ibe indawo efanelekayo yebhizinisi.
Njengenhloko-dolobha ye-UAE, uhulumeni uxhasa ngokuqinile izimboni zamabhizinisi endawo nabezindaba, abeka imali enkulu ekuqhamukeni nasekugcineni indawo ezinzileyo yezomnotho ekhuthaza abatshalizimali. I-Abu Dhabi igcwele izindawo zokuzithokozisa zebhizinisi-lesimanjemanje njengesikhungo somhlangano wezwe, amahhotela okunethezeka, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, amageyimu wokuklama igalofu futhi kungekudala, eminye iminyuziyamu edume kakhulu emhlabeni.
Ama-mall amakhulu kunezitolo zokuphila nempilo yasendaweni enza umuzwa omuhle wokuthenga. Izitsha ezimangalisayo zasendaweni nezamazwe aphesheya zisetshenziselwa ezindaweni zokudlela ezisezingeni lomhlaba ezweni lonke. Ukugijimela nokuhamba ngamabhayisekili nge -icheiche yedolobha ebukekayo noma ngasogwini lolwandle kuyindlela eyamukelekile yokwazi ukuzivocavoca komzimba.
USheikh Zayed Grand Mosque
I-Sheikh Zayed Grand Mosque ingelinye lamaSulumane amakhulu emhlabeni. Ubunjiniyela obuhle besimanje bamaSulumane bakhiwa nguSheikh Zared Bin Sultan Al Nahyan ekukhunjweni kukayise. I-mosque inenhlonipho yokuba nekhaphethi enkulu kunazo zonke emhlabeni eyaqedwa ngabasebenza ubuciko abayi-1200 eminyakeni emi-2.
Itholakala esiQhingini saseSaadiyat empumalanga ye-Abu Dhabi, iLouvre iyindawo yokuqala yobuciko neyimpucuko yohlobo lwayo e-United Arab Emirates. Kungumkhombandlela ofanele osendaweni egcizelela kakhulu ukulondolozwa nokwazisa ngesiko.
I-Ferrari World iyipaki lokuqala le-Ferrari 'themed' noma kuphi emhlabeni. Inikeza izivakashi i-adrenaline-pumping nakho ngemibono yayo eyingqayizivele yokugibela kwayo. Ngaphandle kokugibela i-Ferrari themed rides, kukhona ukudlala bukhoma, ama-karts kagesi, kanye nesimo se-simulators yezobuciko.
I-Warner Bros. Umhlaba
Kude kude neFerrari World e-Yas Island yiWarner Bros. Umhlaba u-Abu Dhabi, iphrojekthi eyi-1 billion yamadola okuyipaki yokuzijabulisa enomoya ophelele futhi equkethe abagibeli abangama-29, izindawo zokudlela ezi-7, izitolo nemibukiso ethokozisayo, efaka phakathi izinhlamvu zokuzijabulisa ezidumile zeWarner Bros. Ingqikimba ihlukaniswe izindikimba eziyisithupha zokucwilisa okuyizindawo ezingamaGotham City kanye neMetropolis (lokhu kulingisa ngamasethi wezinhlamvu ezingama-DC ezinjengeBatman noSperman, uCartoon Junction noDynamite Gulch (imitapo yolwazi egcwele yemoto kaLooney tunes noHanna Barbera), Bedrock (ingqikithi esekwe eFlintstones), naseWarner Bros. Plaza ekhombisa iHollywood yezinsuku zakudala.
Nganoma yiluphi usuku, ukukhanya kwelanga nesibhakabhaka esilindelekile kungalindelwa e-Abu Dhabi. Kodwa-ke, leli dolobha lihlangabezana nesimo sezulu esishisayo nesinomswakama kusuka ngo-Ephreli kuya kuSepthemba lapho okushisa okuphezulu kungaba ngu-40 ° C (104 ° F). Futhi, lesi isikhathi lapho izivunguvungu zesanti ezingalindelekile zenzeka khona edolobheni futhi ukubonakala kwehlela kumamitha ambalwa.
Cishe zonke izakhiwo zedolobha zinezinhlelo zokupholisa umoya. Isikhathi esiphakathi kuka-Okthoba noMashi sipholile uma siqhathanisa. Ngezinsuku ezithile, inkungu ebuthuntu iyabonakala. Izinyanga ezipholile kunazo zonke onyakeni zingoJanuwari nangoFebhuwari.